Bafuna ukukhula emculweni abase-UKZN | News24
Bafuna ukukhula emculweni abase-UKZN
ABAFUNDI ababili besifazane baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eMgungundlovu baveze ukuthi bafuna ukuzibona bekhula endimeni yezomculo kuze kuba bakhipha amacwecwe omculo obhalwe yibo.
UNks Angel Mazibuko (24) beno noNks Lebohang Khoza (20) baqale ukucula ndawonye ezinyangeni ezimbili ezedlule. Kanti sebezibiza ngeqembu u-X’alo. Leli qembu licula umculo ohlukene okubalwa kuwona i-Afro-Soul kanye ne-Pop.
Engxoxweni ekhethekile ne-Echo laba bafundi bageqe amagula ngohambo lwabo emculweni nokuthi bahlangana kanjani.
UNks Mazibuko, owenza unyaka wesithathu ezifundweni ze-Bcom in Marketing and Economics, utshele i-Echo ukuthi selokhu ehlangene nozakwabo izinto zibahambela kahle.
Uthe besekuphele isikhathi esingangonyaka bazana kodwa bebengakaze bahlanganise lutho olubhekelene nezomculo.
“Bengijwayele ukumbona ezindaweni uma ngiyocula naye efike ngokuzocula kwazise besisekwamanye amaqembu ahlukene abantu ekade sisebenzisana nabo. Into engayibona kuyena ukuthi uyasixebula isigingci kanti futhi unethalente elikhulu. Sasihleli sihlangana isikhathi esiningi kodwa singakaze sikhulume ukuthi sifuna ukucula ndawonye kwaze kwaba imenenja yethu uMnu Thuthukani Mwelase wabe esesihlanganisa ngoba esibona ukuthi singasebenzisana kahle ndawonye.
“Selokhu ngiqalile ukusebenzisana noLebo ngijabulile kakhulu ngoba sobabili singabantu besifazane siyazwana nokwenza kube lula ukuthi sisebenzisane. Lokhu ngikubona njengecebo likaNkulunkulu elihle ngoba kukhulu esizokwenza emculweni. Sifuna ukukhula nathi emculweni sigcine sesina-CD omculo wethu.
“Sizimisele futhi ukusebenza kanzima ukuze sizokwazi nathi ukuthi sibe yingxenye yabaculi abazonandisa kwindumezulu yomcimbi waminyaka yonke i-Pietermaritzburg Jazz Festival ngonyaka ozayo,” kubeka yena.
UMazibuko uthe waqala ukucula eneminyaka cishe eyisithupha nje kuphela. Uthe waqala ecula esikoleni kwaze kwaba uyakhula wagcina esenandisa emicimbini efana nemishado kanye neyokwethweswa iziqu.
UNks Khoza, yena owenza unyaka wesibili ezifundweni ze-Dramatic Arts, uthe ujabule kakhulu ngokusebenzisana noMazibuko.
“Ukusebenza kwethu sobabili singamantombazane kwenza izinto zibe lula kakhulu ngoba siyazwana kanti futhi sicishe silingane nangokwemiyaka. Mina ngaqala ukubona ithalente lami lomculo ngesikhathi ngifunda esikoleni samabanga aphakeme, kusukela lapho angikaze ngibheke emuva. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi iphupho lethu liphumelela emculweni,” kubeka yena.
Bebuzwa ngesikhathi sokuzilolongela umculo uma bezoya konandisa, uMazibuko uthe kwesinye isikhathi kuba nzima kwazise benza izifundo ezingafani nokwenza babuye baphambane isikhathi esiningi.
“Uthola ukuthi kwesinye isikhathi siba nesikhathi esingangehora kuphela ndawonye ukuba sizilungiselele kodwa ngoba uLebo unethalente elikhulu ekushayeni isigingci kwenza izinto zibe lula kakhulu. Sizama ngayo yonke indlela ukuthi sibhalansise umsebenzi wethu wesikole kanye nomculo ukuze kungabikhona okusalela emuva kunokunye.”
Uma ufuna ukuzibonela mathupha leli qembu liyanandisa njalo ngoLwesibili kanye nangeSonto e-Sprytz Premium Lounge.